Ogaden News Agency (ONA) – Xarunta Dhexe ee JWXO oo ka warbixisay 15 weerar oo cadawga lagu qaaday bishan gudaheeda
Xarunta Dhexe ee JWXO oo ka warbixisay 15 weerar oo cadawga lagu qaaday bishan gudaheeda
Posted by ONA Admin	/ March 23, 2014
Warbixintii aan ka helnay Xarunta Dhexe ee JWXO ayaa faahfaahin dheeraad ka bixisay dagaallo badan oo ciidanka gumaysiga lagu naafeeyay bishan March gudaheeda. Warbixinta dagaalada aan helnay oo ka kooban 15 dagaal ayaa inta tirakoobkooda faahfaahsan la helay lagaga dilay cadawga askar darajooyin kala duwan lahaa oo gaadhaya 47askari meesha dhaawacu uu intaa ka badan yahay. Goobaha ay dagaaladaa ka dhaceen iyo khasaaraha soo gaadhay cadawga oo faahfaahsan waa sidan;
1/3/14 Seeleey oo Dagmada Garbo ee Gobolka Nogob katirsan weerar balaadhan oo ay CWXO kuqaadeen ciidan uu cadawguleeyahay oo halkaas kusugnaa waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 7 askari 9 kalana waa lagaga dhaawacay.
6/3/14 Inabiin oo Dagmada Gunagado ee Gobolka Jarar katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa wali lahelin.
10/3/14 Biyokulmay oo dagmada Xamaro ee Bobolaka Nogob katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidamada gumaysiga Itoobiya lagaga dilay 3 askari 1 kalana waa lagaga dhaawacay.
11/3/14 Tuulada Xamaro oo dagmada Garbo katirsan dagaal kulul oo CWXO iyo kuwa cadawga kudhexmaray waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 5 askari 8 kalana waa lagaga dhaawacay.
12/3/14 Haarcaday ii Iimaybari katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagu gaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
12/3/14 Shafmaroodi oo Iimaybari katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 2 askari 1 kalana waa lagaga dhaawacay.
13/3/14 Mandooyalay oo dagmada Dhagaxmadow ee Gobolka Jarar katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagugaadhsiiyay khasaare aan faahfaahintiisa lahaynin.
16/3/14 Garbocobol oo dagmada Dhuxun katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay 1 askari 1 akalana waa lagaga dhaawacay.
17/3/14 Abeesalay oo Garigo’an katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 2 askari.
18/3/14 Gacan oo dagmada Dhagaxbuur ee xarunta Gobolka Jarar katirsan dagaal xoogan oo CWXO iyo kuwa gumaysiga ku dhexmaray waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 7 askari 10 kalana waa lagaga dhaawacay.
19/3/14 Garbocobol oo dagmada Dhuxun latirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka saamalaluudka ah ee gumaysiga Itoobiya lagaga dilay 5 askari 4 kalana waa lagaga dhaawacay.
19/3/14 Labiga iyo Xerojaarso oo Dhagaxbuur kawada tirsan dagaalo kakaladhacay waxaa ciidanka wayaanaha lagaga dilay inta lahubsaday 1 askari khasaare kale oo aan faahfaahintiisa lahayninna waa lagaadhsiiyay.
20/3/14 Raaf-adhi oo Dhagaxmadow katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka dulmiga kujooga ciida Ogadenia ee wayaanaha lagaga dilay 3 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.
20/3/14 Aqalaale oo tuulada Yucub ee Gobolka Doollo katirsan dagaal culus oo CWXO iyo kuwa cadawga ku dhexmaray waxaa ciidanka cadawga lagaga dilay 8 askari 10 kalana waa lagaga dhaawacay.
20/3/14 Maska oo dagmada Dhuxun katirsan dagaal kadhacay waxaa ciidanka gumaysiga lagaga dilay 3 askari 2 kalana waa lagaga dhaawacay.